Dembele Oo Premier League-ga Kusoo Wajahan, Brendan Rodgers Oo Lampard Lagu Bedelayo, Dagaalka Loogu Jiro Upamecano Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa – Garsoore Sports
Dembele Oo Premier…
Maadaama uu furanyahay suuqa kala iibsiga cayaartooyda ee bisha Janaayo kooxu waxay ku kala hormarayaan saxiixyada bartilmaameedyadooda, iyadoo koox weliba ay dooneyso inay boosas gaar ah iska xoojiso isla markaana ay isku diyaariyaan inta xilli cayaareedka ka haray.
Hadaba waxaan idiinsoo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee daaqada suuqa kala iibsiga ee warbaahinta hadal heyso.
Barcelona ayaa rajeyneysa inay si bilaash ah kula soo saxiixato weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero oo 32 jir ah iyo daafaca Bayern Munich David Alaba oo 28 jir ah xagaaga, marka qandaraasyadooda ay dhammaadaan. (Mundo Deportivo, Via Mail on Sunday)
Chelsea iyo Manchester United ayaa la socda xaalada qandaraaska laacibka reer France ee Ousmane Dembele ee kooxda Barcelona, ​​iyadoo 23 jirkaan ay 18 bilood uga harsan yahay heshiiska uu kula joogo kooxda ka dhisan Nou Camp. (Sport, via Metro)
Man United ayaa fool-ka-fool u wajihi doonta Liverpool si ay ula soo saxiixato daafaca reer France iyo kooxda RB Leipzig Dayot Upamecano oo 22 jir ah (Sunday Mirror)
Daafaca reer Greece Sokratis Papastathopoulos, oo 32 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda reer Talyaani ee Lazio ka dib markii qandaraaskiisii ​​Arsenal uu dhamaaday. (Gazzetta dello Sport)
Bayern Munich ayaa bilowday inay horumar ka sameyso wadahadalada heshiis kordhinta oo ay kula jirto 17 jirkeeda khadka-dhexe ee Jamal Musiala iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Liverpool iyo Manchester United ay isha ku hayaan cayaaryahanka 21 jirada Ingiriiska u safta. (Goal)
Manchester United ayaa go’aan ka gaari doonta mustaqbalka cayaaryahanka khadka-dhexe ee England Jesse Lingard kaddib kulankoodii FA Cup-ka oo ay caawa la cayaarayaan kooxda Liverpool, iyadoo Newcastle United, Sheffield United iyo West Brom ay doonayaan inay amaah ku qaataan 28 jirkan.
West Ham ayaa lala xiriirinayay weeraryahanka reer Morocco Youssef En-Nesyri laakiin 23 jirkaan ayaa sheegay inuusan bishan Janaayo ka tagi doonin kooxdiisa Sevilla. (Estadio Deportivo)
Everton iyo Leicester City ayaa xiiseynaya weeraryahanka Southampton iyo England Danny Ings, kaasoo 18 bilood uga hartay qandaraaskiisa kooxdiisa Southampton. (90 Min)
Tababaraha kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa ka mid ah macalimiinta ay Chelsea eeganeyso iney tababare ka dhigato haddii ay go’aansato inay ceyriso Frank Lampard. (Daily Star)
Atalanta Oo 3 Iyo Waxba Ku Xasuuqday Ac Milan Oo Gurigeeda Ku Cayaareysay